पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट ४ जनाको मृत्यु, झापाका १३ जना संक्रमित अरू जिल्लामा कति ? (विवरणसहित) - झुल्केघाम
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट ४ जनाको मृत्यु, झापाका १३ जना संक्रमित अरू जिल्लामा कति ? (विवरणसहित)
झापा,साउन १६ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा २२४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा २२४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए।
योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १९,७७१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १५१ जना डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या १४,३९९ पुगेको छ । हाल कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५६ रहेको छ ।